Home Wararka Qarax goordhow ka dhacay Suuqa Bakaaraha
Faah faahino dheeraad ah ayaa waxaa laga helayaa qarax goordhow ka dhacay gudaha Suuqa Bakaaraha ee magaalada Muqdisho, kaas oo laga helayo warar kala duwan.
Qaraxa ayaa la sheegay inuu ka dhacay halka loo yaqaano Sarifyaraha, isla-markaana uu ka dhashay gaari NOAH ah oo la sheegay in lagu soo xiray walxaha qarxa.
Ma cadda inta uu gaarsiisan yahay khasaaraha, laakiin waxaa uu qaraxa ka dhacay goob ay ku sugnaayeen dad fara badan.
Sidoo kale waxaa meesha gaaray ciidamo ka tirsan kuwa ammaanka, gaar ahaan Booliska degmada Howl-wadaag oo isku geedaamay goobta ay wax ka dhaceen.
Xaaladda ayaa aad u kacsan, waxaana sidoo kale qaraxan uu saameyey dhaq-dhaqaaq qaybo ka mid ah Suuqa weyn ee Bakaaraha.
Saraakiisha laamaha ammmaanka weli kama hadlin qaraxan, balse waxaa haatan socda baaritaano ay wadaan saraakiisha laamaha ammaanka ee Soomaaliya.
Qaraxan ayaa qayb ka noqonayo falal ammaan darri oo todobaadyadii lasoo dhaafay siyaabo kala duwan uga dhacayey gudaha magaalada Muqdisho.
Si kastaba, amni darrada ka jirta caasimada ayaa waxaa loo sababeynayaa xaaladda kala guurka ah ee uu dalka ku jiro iyo mashquulka doorashooyinka ka socda Soomaaliya.
Previous articleMaxkamada Ciidamada Qalabka sida ee Soomaaliya oo maanta xukun ridday
Next articleCiidamo Midowga Afrika (AMISOM) oo loo bixiyay magac cusub ATMIS